Daawo Qaabkii Uu Gabriel Jesus Koobka Aduunka Uga Cidhibiray Saaxiibkiisa Claudio Bravo & Alexis Sanchez Iyo Paulinho Oo Wacdaro Cusub La Soo Baxay. – WWW.Gool24.net
Daawo Qaabkii Uu Gabriel Jesus Koobka Aduunka Uga Cidhibiray Saaxiibkiisa Claudio Bravo & Alexis Sanchez Iyo Paulinho Oo Wacdaro Cusub La Soo Baxay.
Xulka qaranka Brazil ayaa ku raaxaystay guul kale oo ilqabad leh kadib markii ay 3-0 ku dubteen xulka qaranka labada jeer ee xidhiidhka ahayd ku soo guulaystay koobka qaramada South America ee Chile, wuxuuna kulankani ahaa mid uu xulka qaranka Brazil ku sii muujiyay sida uu yahay mid ka mid ah qaramada looga cabsan doono ku guulaysiga koobka aduunka. Tan iyo markii uu tababare Tite la wareegay xulka qaranka Brazil waxaa soo laabtay sumcadii iyo cabsidii laga qabi jiray maaliyada midabka dheer leh ee Selecao.
Gabriel Jesus ayaa muujiyay sida uu mustaqbal wayn ugu leeyahay kubbada cagta gaar ahaan xulka qarankiisa Brazil isaga oo ceebeeyey goolhayaha ay isku kooxda yihiin ee Claudio Bravo kaas oo uu laba gool ka dhaliyay laakiin sidoo kale Paulinho ayaa muujinaya in uu yahay hubka qarsoon ee Brazil.
Waxaa layaab noqotay in xidig loo arkayay in uu fashilmay isla markaana aan fursad u heli doonin xulka qarankiisa Brazil uu 13 kii kulan ee ugu danbeeyay uu ka soo dhaliyay 6 gool isla markaana uu 3 gool caawineed soo sameeyay halka uu hal saddexley soo dhaliyay. Paulinho ayaa goolasha Brazil u daah furay kulankii Chile.
Laakiin goolka labaad ee uu Brazil u dhaliyay Gabriel Jesus ayaa ahaa mid farshaxan layeebleh ay uga soo shaqeeyeen Philippe Coutinho oo kubbad layaableh oo min qiyaas ku socota u diray Neymar Jr kaas oo si qurux badan kubbada u maamulay wuxuuna hadiyad uga dhigay Gabriel Jesus kaas oo Bravo shabaqa u dhaafay.
Xulka qaranka Chile ayaan koobka aduunka ka soo muuqan doonin markii ugu horaysay tan iyo sanadkii 2006 waxayna iska lumiiyeen fursad wayn oo ay u haysteen in ay koobka aduunka u soo bixi kareen. Laakiin Brazil oo aan guushan ugu baahnayn in ay soo baxaan ayaa galaaftay rajadii ay koobka aduunka kaga soo muuqan kareen, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Claudio Bravo iyo xidigaha kale ee Chile.
Haddaba halkan ka daawo muuqaalka goos gooskii kulankii ay Brazil 3-0 koobka aduukna kaga cidhibtirtay xulka qaranka Chile.